Gianluigi Donnarumma oo billada NxGn ku qaatay laacibka ugu wanaagsan xiddigaha soo baxaya + Sawirro – Gool FM
Gianluigi Donnarumma oo billada NxGn ku qaatay laacibka ugu wanaagsan xiddigaha soo baxaya + Sawirro
(London) 22 Maarso 2017 – Xiddig-yaraha AC Milan ee Gianluigi Donnarumma ayaa qaatay abaalmarinta NxGn, oo uu Goal.com ku qiimeeyay 50-ka laacib ee da’yarta ah ee ugu hibada badan kubadda cagta.
Goal ayaa arrintan hor dhigay khubarada khubaro kubadeed oo dunida kala jooga, iyadoo ay qiimayntu khuseeysay laacibiinta dhashay bisha Jannaayo 1, 1998 ama kaddib, iyadoo lagu qiimaynayay khibradda, mustaqbalka ay leeyihiin iyo natiijooyinkoodii ugu dambeeyay.
Donnarumma ayaana kaalinta 1-aad galay iyadoo 18-jirkan reer Talyaani uu yahay laacib booskiisa ka xoreystey AC Milan isagoo 16-jir ahaa, dad badanina u arkaan ninkaBuffon iyadoo ay khubarada xitaa sheegeen inuuba ka fiicnaan karo Gigi Buffon.
Waxaa kaalinta 2-aad galay qannaaska AS Monaco ee Kylian Mbappe, oo lagu naynaaso new Thierry Henry isagoo magacaa ku helay tillaabo dheeridiisa iyo dhamaystirkiisa dhiirranaantu ku dheehan tahay.
Garab-weerarka reer Maraykan ee Christian Pulisic ayaa kaalinta 3-aad galay, waxaana uu ka mid ah 3 laacib oo ka tirsan Borussia Dortmund oo 10-ka sare galay, waxaana wehliya weeraryahanka Swedish-ka ah ee Alexander Isak (shanaad) iyo dadabka midig ee Felix Passlack (siddeedaad).
Donnarumma saaxiibkii Manuel Locatelli oo sanadkan wacdaro ka dhigay Serie A ayaa kaalinta 6-aad xirtey, isagoo ka horreeya dambeedka Nice ee Malang Sarr, oo ay daba socdaan Arsenal, Chelsea iyo Barcelona.
LAACIIBIINTA SARE EE NxGn:
AC Milan (Donnarumma and Locatelli), United (Fosu-Mensah and Angel Gomes), Liverpool (Ben Woodburn and Trent Alexander-Arnold), Real Madrid Castilla (Sergio Diaz and Achraf Hakimi), Ajax (Justin Kluivert and Matthijs De Ligt) Paris Saint-Germain (Moussa Diaby and Lorenzo Callegari) and Metz (Vincent Thill and Ismaila Sarr) Kulligood min laba ayay leeyihiin.
Miranda loo doortay in uu noqdo kabtanka Brazil